Akhriso war-saxaafadeed-ka QM ay ka soo saartay xaaladda Soomaliya | Xaqiiqa Times - Online Magazine
Home Wararka Maanta Akhriso war-saxaafadeed-ka QM ay ka soo saartay xaaladda Soomaliya
Akhriso war-saxaafadeed-ka QM ay ka soo saartay xaaladda Soomaliya
Soomaaliya: Gargaar bini’adanimo oo deg-deg ah ayaa loo bahanyahay si wax looga qabto xaalada abaaraha ee kasii daraya.
Nairobi, 2 December 2016 – Xiriiriyaha Hawlaha Bani’aadamnimada ee Soomaaliya, Peter de Clercq, ayaa codsadey in gargaar bani’aadamnimo oo deg-deg ah lala gaaro boqolaal kun oo Somaali ah ay soo food saartay cunto yari iyo biyo la’aan aad u daran. Isagoo warbixin siinayey beesha caalamka ee ku sugan magaalada Nairobi, ayuu hoosta ka xariiqey baahida loo qabo in si deg-deg ah looga jawaabao xaalada abaaraha ee ka jirta Soomaaliya.
“Abaaraha kajira Puntland iyo Somaliland ayaa sii baahaya iyagoo sidoo kale ku faafay gobollada koonfurta iyo bartamaha dalka. Abaraahu waxa ay si ba’an u saameeyeen qoysas aad u nugul oo aan heysan wax ay cunaan. Xaaladda abaarta ayaa ah mid welwel leh, waa ayna sii xumaan kartaa, hadii aan si deg-deg ah talaabo loo qaadin , “ayuu yiri de Clercq. “Waxaa nagu socda wakhti, ururrada bani’aadamnimada ayaa u baahan dhaqaale dheeraad ah si wax looga qabto baahida sii kordhaysa ee keeneen abaaraha iyo dhibaatooyinka kale.Qorshaha Waxqabadka Bani’aadamnimada ee 2016 oo doonayey lacag dhan US$885 million, waxaa la heley boqolkiiba 47 xilli afar todobaad uun ka harsantahay dhamaadka sanadka. ”
Qaar ka mid ah bulshada ku dhaqan waqooyi ayaan helin roobab ku filan afar xilli roobaad oo isku xigta. Qoysas badan ayaa isku dayaya talaabooyin ay ku badbaadiyaan noloshooda. Xilli roobaadka Deyrta oo sida caadiga ah u dhexeeysa bilaha October ilaa December ayaa ahaa kuwo aad uga yar xadigii la filaayey taasoo qasaaro ba’an ku keentey dalagii la filaayey iyo daaqa xoolaha meelo badan oo kamid ah gobalada waqooyi.
Guud ahaan, shan milyan oo Soomaali ah – in ka badan boqolkiiba 40 ma haystaan cunto ku filan. In ka badan hal milyan oo qof ayaa ku jira xaalad halis ah. Tirada ayaa la saadaalinaya in ay siyaado oo ay gaarto in ka badan 1.3 milyan bisha May 2017. Intaa waxaa dheer, In ka badan 320,000 oo carruur ka yar shan sano jir ayaa la ildaran nafaqo-daro kuwaasi oo in ka badan 50,000 ay heyso oo nafaqo-xumo ba’an. Carruurta ayaa ah kuwa ugu nugul inta lagu jiro abaarta haatan taagan.
Madaxweynaha dowladda federaalka ah ee Soomaaliya oo soo saarey baaqa 12kii November ayaa codsaday in gargaar bani’aadamnimo lala gaaro dadka ay abaaruhu saameeyeen. Maamulada Jubbaland, Puntland, Somaliland iyo Galmudug ayaa sidoo kale soo saaray baaqyo kala dugan 2 October, 5 October, 17 November iyo 30 November, baaqyadan oo ku aadanaa in si deg deg ah wax loogu qabto xaaladaha abaarta oo xiligan ka jira wadanka. Waxa intaa dheer barakac la xiriira colaadda iyo bixitaanka ciidamada caalamiga taasi oo keentey caqabado bini’aadanimo oo dheeraad ah. Ku dhawaad 5,000 oo qof ayaa ku barakacey gobollada Hiiraan iyo Bakool, halka 29,000 qof oo kale ee ka barakaceen guryahooda, Gobolka Shabeellaha Hoose.
Previous articleRw oo codsaday in hogaanka dalka is-badel lagu sameeyo
Next articleMaalinta Naafada addunka oo Muqdisho laga xusay